नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र बिराटनगरमा पत्रकारहरु बिच भएको घम्साघम्सीको पूर्ण अडियो र भिडियो सार्वजनिक !
अख्तियार प्रमुख लोकमान सिंह कार्की र बिराटनगरमा पत्रकारहरु बिच भएको घम्साघम्सीको पूर्ण अडियो र भिडियो सार्वजनिक !
लोकमान अलिकती आबेशमा आउनु गल्ती थियो भने सुपारी काण्ड बारे प्रश्न कर्ता पत्रकारहरुको प्रश्न सुन्दा उनिहरु पत्रकार नभएर सुपारी ब्यापारी जस्तो भान भयो ! कठै नेपालको पत्रकारिता पनि नेपाली राजनीति जस्तै बनेछ भन्न कुनै संकोच लागेन यो अडियोको पुरा विवरण र भिडियो हेरे पछी ! के पत्रकार भन्दैमा जे पनि बोल्न, मुख छाड्न, अपशब्द प्रयोग गर्न छुट छ र ?? प्रमाण तल आफै यसरी बोलिरहेछ हेर्नुस् !!!